काठमाडौँ । सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लव र न्युरोड टिम एनआरटीलाई पाँच एक गोल अन्तरले हराएको छ । जारी लिगमा पहिलो जित निकाल्ने क्रममा च्यासलको जितमा विमलले दुई गोल गरे । सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफमा च्यासलले दुई गोलको अग्रता बनाएको छ । उसका लागि दुबै गोल अमिर श्रेष्ठले […]
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्य सम्पादनको गति बढाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य सम्पादन गर्दा आदेश तामेलीको भर नपर्न पनि मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई सचेत गराउनु भयो । बिहिबार सिंहदरबारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, खानेपानी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भूमि […]
काँग्रेसले भन्यो –“नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?”
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार पुर्णत असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकार गठनको ९ महिनाको अवधिमा देशमा सरकार भएको महसुस गर्न नसकिएको भन्दै “नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?” भनी प्रश्न गरेको छ । बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले […]
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । कार्तिक पहिलो सातादेखि बस्न नसकेको सचिवालय लामो समयपछि बस्न लागेको हो । सचिवालय बैठकमा प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला संगठन गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनलगायत प्रस्ताव तयार हुने र लगत्तै स्थायी समिति बैठक बोलाई अनुमोदन गराउने तयारी नेकपाको छ । बैठक बस्न नसक्दा पार्टी […]
उदयपुर — भारतीय महिला लजिना खातुनलाई नेपाली नागरिकता दिएको विषयमा स्थानीय प्रशासनले छानविन सुरु गरेको छ । छानविनका क्रममा लजिनाको नागरिकताका लागि सिफारिस सर्जमिन मुचुल्का सहीछाप गर्ने दर्जनभन्दा बढीसँग बयान लिइएको छ । झुटो विवरण पेस गरी त्रियुगा नगरपालिका १०, बोक्से बस्ने भारतीय लजिनाले नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन् । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी दिल मोहमदकी […]
हुम्ला — तीन महिनादेखि चामल किन्न नपाएपछि सिमकोट गाउँपालिका–४ गुराउँसेका गोल विक वडा कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष छविचन्द्र लामाले सिफारिस गरिदिए। उनी वडाको सिफारिस बोकेर गाउँपालिका कार्यालय पुगे। हारगुहार गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष्ँ पदम लामाले अर्को सिफरिस बनाइदिए। सिफारिस पत्रमा लेखिएको थियो, ‘श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, गरिबलाई १० केजी चामल सहयोग गरिदिन अनुरोध छ।’ गाउँपालिका अध्यक्षको […]
पोखरा — गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक हरेक साता बुधबार बस्दै आएको छ। चाडपर्वका वेला वा मुख्यमन्त्री बाहिर हुँदाबाहेक बैठक नबसेका उदाहरण कमै छन्। साप्ताहिक बैठकको परम्पराले यो बुधबार निरन्तरता पाएन। कारण मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहित अधिकांश मन्त्री पोखराबाहिर रहे।आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ बुधबार गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हरि अधिकारीको छोरीको […]
‘विप्लव’का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
जुम्ला — जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा १ मंसिरमा एकैसाथ भएको आक्रमण घटनामा संलग्न आशंकामा मुगु सोरु गाउँपालिकाका रामबहादुर भाम र जुम्ला तिला गाउँपालिकाका लक्ष्मणनाथ योगी संग्राम पक्राउ परेका छन् । उनीहरुबाट विभिन्न स्थानमा संकलित ३५ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँको चन्दा रसिद, डायरी, पार्टीका पर्चा, पम्प्लेटसमेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय तहमा भएको […]
कौडीको भाउमा भाडा
काठमाडौँ — सानोठिमी क्याम्पसले मूल सडकसँग जोडिएको १३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ९७ रुपैयाँमा १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको हो । भूकम्पमा स्थानीयले आश्रय लिएको १३ रोपनी जग्गा रेस्टुरेन्ट र क्याटरिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक […]
‘जमिन राज्यको हुनुपर्छ’
काठमाडौँ — जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले सबै क्षेत्रको लागत बढाएको र वित्तीय स्थायित्वमै समस्या भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघको कार्यक्रममा बुधबार उनले जमिन निजी सम्पत्ति नभई भोगाधिकार मात्रै हुनुपर्ने बताए । ‘जमिन राज्यको हुनुपथ्र्यो । निजी सम्पत्तिका रूपमा हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिहाल्यौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘जमिनमा कसैको स्वामित्व […]